(Last Nohavaozina: 18/02/2020)
Raha toa ianao mihevitra ny hahita firenena maro Nandeha lamasinina any Eoropa dia mety ho fahendrena ny mihevitra mampiasa vola amin'ny Interrail Pass, na izay tsy miantso ny EU olom-pirenena Eurail. An Interrail Pass hahatonga ny fiaran-dalamby Tsidika mora kokoa. Na izany aza, raha amin'ny Nihamafy teti-bola, tapakila tsirairay avy dia mety miasa mora (indrindra indrindra raha mandeha atsinanan'i Alemaina). Diniho ny teti-bola sy manao fikarohana eo anatrehanao ny lalamby handalo boky. Ny tranokalanay saveatrain.com no tonga lafatra toerana mba hanomboka hanampy drafitra ny diany manerana an'i Eoropa.
Fonosina ny vatsy sahaza ho an'ny dia ho an'ny dia lamasinina any Eropa
Ny ankamaroan'ny lamasinina dia manana trano fisakafoanana, Cafe kalesy na sakafo maivana sarety izay tonga avy amin'ny fivarotana mofo voasesika, zava-pisotro malefaka sy ny maro hafa. Fa raha mandeha mafy amin'ny teti-bola, na ianao manokana sakafo fepetra, ka ilaina ny hitondra tsakitsaky miaraka anareo mandritra ny dianareo.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)